Rohingya Students Forum: ရိုဟင်ဂျာရိုးရာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
🎎 ဝတ်စားဆင်ယင်မှု 🎎
ရေးသူ 📚 ရိုဟင်လေး
အမျိုးအစား 📚 ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု |
“လူမှာအဝတ်၊ တောင်းမှာအကွပ်” ဆိုသည့် ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ကမ္ဘာလောက၏ လူတို့သည် ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းခြင်း တို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် ၎င်းသူတို့၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ပြောဆို ဆက်ဆံမှုကလည်း အဓိကကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ လူမျိုးအသီးသီး၌ သူတို့ ကျက်စားမှီတင်း နေထိုင်ရာ ဒေသ၊ ရာသီဥတုနှင့် မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် မတူကွဲပြားသော အဝတ်အစားများကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆင်ယင်လာကြသည်။ ရှေးရိုးအစဉ်အလာ ဓလေ့ထုံးစံ အလိုက် အဆင်တန်ဆာများကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ တမြတ်တနိုး ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ထို ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတို့သည် သူတို့၏ အမှတ်အသား လက္ခဏာပင် ဖြစ်ပေသည်။
“Gas siné bahole , Manúic siné ahol le.”
ထိုသို့ ဝတ်ဆင်ရာတွင် အမျိုးသား အဝတ်တန်ဆာ နှင့် အမျိုးသမီး အဝတ်တန်ဆာ ဟူ၍ တကွဲတပြား ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။
ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတို့သည် ဟိုးရှေးပဝေသဏီကစ၍ အဝတ်အစားများ အသွင်သဏ္ဍာန် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲ ဝတ်ဆင်လာခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်နှင့် ယခုခေတ် ကွာခြားမှုတော့ ရှိမည်။ သို့ရာတွင် နီးနီးစပ်စပ် တူညီမှုတော့ရှိသည်။ တစ်ဖက်က တမြေနေ တရေသောက် ညီနောင် တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဝတ်စား ဆင်ယင်ပုံနှင့်လည်း အတော်ကို တူလွန်လှသည်။
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ခွဲခွဲခြားခြား ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ရှေးအမျိုးသားများသည် လက်မဲ့ ကိုယ်လုံ အင်္ကျီများကို ဝတ်ခဲ့သည်ကိုလည်း ဖူတီများအရ သိရသည်။ ခေတ်ကာလ ကြာလာသည်နှင့်မျှ လူတို့၏ အဝတ်တန်ဆာသည် တဖြေးဖြေး တိုးတက်လာလေသည်။ ရှေး ယဉ်ကျေးထွန်းကားခဲ့သော ကာလတွင် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် တောင်ရှည်ပုဆိုး နှင့် လက်ရှည် အင်္ကျီဖြူကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းကြ သည်။ ခါးစည်း စည်းကြသည်။ အမျိုးသမီး ရင်ဖုံးဆူလီအင်္ကျီနီများ နှင့် ကေသ ထိုင်ဉ် များ (ထဘီ) ဝတ်ဆင်လေ့ရှိကြသည်။ ပုဝါတဘက် ခေါင်းမှ ရင်ဖုံးအောင် လွှမ်းကြသည်။ ဆံထုံးတွင် ပန်းကုံး၊ ပန်းပွင့်များ ပန်ကြသည်။ လက်ဝတ်ရတနာများကို ခြေ၊ လက်၊ လည်ပင်း၊ နားရွက် နှင့် ခေါင်းတို့၌ တန်ဆာဆင်ကြ သည်။ ယင်းတို့ကို အမျိုးသား အဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် အမျိုးသမီး ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ဟူ၍ နှစ်ပိုင်း ခွဲ၍ အောက်တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးပါမည်။
(၁) အမျိုးသား ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
Head-man Abdu Salam Duashí from Buthidaung in
Rohingya traditional clothing. “Burmese Outposts”.
ရိုဟင်ဂျာတို့သည် အင်္ကျီကို ဘာဇူ [Bazu] ဟု ခေါ်ကြသည်။ ရှေးခေတ်က ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားတို့သည် ဆူလိ[Sulí] ဟုခေါ်သော အင်္ကျီမျိုးကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ဆူလိသည် ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာအင်္ကျီဖြစ်သည်။ ယောက်ျား ဆူလိ နှင့် မိန်းမ ဆူလိ ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ယောက်ျား ဆူလိကို ဖတု [Fátu] ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ် ဇူဗ္ဗာ [Zubba] အထက်ပိုင်းနှင့် ပုံစံတူသည်။ ယောက်ျား ဆူလိအင်္ကျီ အောက်ပိုင်း အနည်းငယ် ရှည်သည်။ တင်ပါးထိ ရောက်သည်။ အင်္ကျီပုံစံမှာ ယနေ့ အင်္ဂလိပ်ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ရင်ကွဲ တစ်တွာကျော်ကျော်လောက် ကြယ်သီး တပ်ရန် ဟထားသည်။ အဝတ်နှင့် လုပ်ထားသော ဂူလိဖီထား [Gulí Fita] ချည်ကြယ်သီးကို တပ်ကြသည်။ လက်မှာလည်း အင်္ကျီလက်ဖျား (Cuff) မပါချေ။ ဟောင်လောင်သာ ဖြစ်သည်။ ကော်လာ လည်ပတ်လည်း မပါချေ။ အင်ဒို အဝတ်အစားနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် တူသည်။ အာရပ်လူမျိုး အဝတ်အစားမှ အသွင်ပြောင်းလာသည်ဟု ပညာရှင်များက ဆိုစမှတ်ပြုကြသည်။
(ခ) စော့ဒေါ်ရီယား [ ပြင်ခံ ]
ကိုလိုနီခေတ်တွင် အဆိုပါ ဆူလိအင်္ကျီကို အပေါ်ဝတ် အင်္ကျီ (တိုက်ပုံအင်္ကျင်္ီ) အဖြစ် ပွဲလမ်းသဘင်တို့၌ ဝတ်ဆင်လာကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားတိုင်းရင်းသား ညီနောင်တို့၏ တိုက်ပုံနှင့် ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားတို့၏ တိုက်ပုံမှာ သိသိသာသာ ခွဲခြားလာသည်။ ဆူလိအင်္ကျီကို ရင်ဘက် အထက်အောက် တောက်လျှောက် ဖြတ်၍ ဝတ်ဆင်ကြသည်။ အောက်ခြေမှာ နည်းနည်းတိုလာကာ တင်ပါးတစ်ဝက်လောက် ရှည်သည်ကို တွေ့ရပါမည်။ အင်္ကျီအိတ်ကား ယနေ့ကဲ့သို့ ရင်ဘတ်၌မရှိပါ။ အင်္ကျီအောက်ခြေ၌သာ တစ်ဘက် အိတ်တစ်အိတ်စီ ကပ်ထားသည်။ အင်္ကျီအတွင်းဘက်၌ အပြင်အိတ် တည့်တည့်တွင် အိတ်နှစ် အိတ် ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း သက်ကြီးများက ဆိုကြသည်။ မတားမဆီး နိုင်အောင် ကိုလိုနီယဉ်ကျေးမှု စီးဝင်ချိန် တွင် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားအချို့သည် ရိုးရာအပြင်ခံအစား အင်္ဂလိပ် ကုပ်အင်္ကျီ (Coat)ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြောင်း ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ အတွင်း၌ ခေတ်ပေါ်အင်္ကျီကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။
ဘာသာရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်္ကျီကို အပြင်ထုတ် ဝတ်ကြလေ့ရှိသည်။
(ဂ) ဖော်ရီ [ခေါင်းပေါင်း]
ဖော်ရီသည် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားတို့၏ ကျက်သရေဆောင်သကဲ့သို့ တမန်တော်မြတ်၏ စနွတ်တော် တစ်ပါးလည်း ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့သည် အများအားဖြင့် ခေါင်းပေါင်းဖြူကို ပေါင်းကြသည်။ ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းပုံပေါင်းနည်းလည်း အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့် အတန်ခြားနားသည်။ ဦးခေါင်း၏ နောက်ဘက်၌ ခေါင်းပေါင်း အမြီး တစ်ဖက်ကို အောက်ဘက် (ပခုံးဘက်)သို့ တစ်တွာကျော်ကျော်လောက် ချထားရသည်။ နောက်အစွန်းတစ်ဘက်ကို ခေါင်းအထက်ဘက်သို့ လက်ချောင်းလေးချောင်းပမာဏခန့် မောက်ထောင်ထား ရသည်။
နန်းတော် လေးတော်တပ်၊ ဘုရင့်သက်စောင့်တပ်တို့၌ အမှူးထမ်းနေသော ရိုဟင်ဂျာ သူရဲကောင်းတို့သည် ပုဆိုးကို အိန္ဒိယပုံစံ ခါးတောင့်ကျိုင်း ဝတ်ဆင်ကြပြီး ခါးတွင် ခါးစည်းတစ်ခု စည်းထားရသည်ဟု ဆိုသည်။ ငှက်တောင်ဓားရှည်ကို ခါး၌ လွယ်သည်။ ခေါင်းပေါင်းအစ ဘုရင်က သတ်မှတ်ထားသော ရာထူးအလိုက် ခေါင်းပေါင်းပုံစံ ဦးထုပ်ကို ဆောင်းလေ့ရှိသည်။ သက်ကြီးများသည် ခေါင်းပေါင်းကို ပေါင်းမြဲ ဖြစ်သည်။
ကိုလိုနီ နောက်ပိုင်းတွင် ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းသည့်ဓလေ့ အားပျော့လာသည်။ ခေါင်းပေါင်းအစ ဦးထုပ်ကို ဆောင်းကြသည်။ သို့သော် သက်ကြီးများ၊ အလုပ်ကြမ်းလုပ်သူများသည် ခေါင်းပေါင်းကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိကြ သည်။ ခါးစည်းစည်းလေ့ရှိသည်။ သက်ကြီးများမှာမူ ဦးထုပ်ကို အမြဲဆောင်းသည်။ Uiddá Matá cóba andar, Murokko miya bezar. ဆိုသည့် ရိုအဆိုလည်း ရှိသည်။
(ဃ) လုံဂီ ပုဆိုး
ရှေးအခါက လုံးကွင်းကို Keñlor hor မှ Háñr hoor မှ Háiñr lok ဟု အသံပြောင်း၍ လည်းကောင်း၊ ဒိုတီ [Doti] ဟုလည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ပုဆိုးကို ခြေတံဆစ်တစ်ဝက် ကျော်ကျော်၌ ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ပုဆိုးဝတ်နည်းကလည်း ရှေ့ထုတ် ဝတ်ကြသည် ဆိုသည်။ ရှေ့ဖက်မှ တစ်တွာလောက် ဒေါင်လိုက် အဝတ်ပိုဝတ်သလို ထင်ရသည်။ အရှက်ကို နှစ်ထပ်ဖုံးအုပ် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။
ကိုလိုနီနောက်ပိုင်း ကာလမှစ၍ အမျိုးသားများသည် လက်ရှည် အင်္ကျင်္ီဖြူ၊ ဦးထုပ်ကို ပွဲလမ်းသဘင် ဝတ်စုံအဖြစ် ဝတ်ဆင်လာကြသည်။ သက်ကြီးအချို့မှာ ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းကြ၊ အပေါ်ဝတ်တိုက်ပုံ ဝတ်ကြ သည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ အစိုးရ ရုံးကိစ္စကျလျှင် တိုက်ပုံဝတ်မြဲဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးဆရာတို့မှာ ဇူဘ္ဘာ၊ ကုရ်သာ၊ ဦးထုပ်နှင့် ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းကြပါသည်။
(၂) အမျိုးသမီး ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
Myanmar Rohingya woman wears traditional clothes
inavillage Gollyadeil north of the town of Sittwe.
DAMIR SAGOLJ/REUTERS #world_cultures
ဣနြေ္ဒရှင် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးများသည် အိစ္စလာမ်သာသနာ့ အထိန်းအကွပ် သွန်သင် ဆုံးမချက်နှင့်အညီ အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်ကြသည်ကို ခေတ်အဆက်ဆက် တွေ့ရပေသည်။
ရှေးရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးများသည်လည်း ဆူလိ အင်္ကျီကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားဆူလိနှင့် နည်းနည်း ခွဲခြားသည်မှာ အောက်ပိုင်း နည်းနည်းတိုသည်။ ကိုယ်ပိုင်း ပွလွန်းသည်။ ကျန်အားလုံးကို တူညီကြသည် ဟုဆိုသည်။ အနီရောင် အဝတ်အထည်များကို ကြိုက်လွန်ကြသည်။
ဆူလိရင်ဖုံး အင်္ကျီကို ဒေသအချို့တွင် သက်ကြီးအမျိုးသားများက ယနေ့တိုင် ဝတ်ဆင်နေသည်ကို တွေ့ရ သည်။ ယင်းမှာ ဟိုးရှေးပဝေသဏီက ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာအမွှေ တစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်း ယူဆောင်လာခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Sulí အင်္ကျီ သည် ယနေ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီ၊ ရင်စေ့အင်္ကျီ ပုံစံ၊ ဘေးတိုက် [Bedait] အဖြစ် ပြောင်းလာကာ ယနေ့ပုံစံကို တွေ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
(ခ) ထိုင်ဉ် (သို့) ထားမီ
ရှေးခေတ်က ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးများသည် ကေသ [Ketá] ဆိုသော လုံးကွင်းထူကို ထဘီအဖြစ် ဝတ်ဆင်ကြသည်။ အထည်လွာ နှစ်ထပ်ကို တစ်ထပ်တည်း ချုပ်၍ ဝတ်ဆင်ကြသည်။ အချို့မှာ အထည်ထူကို လုံးကွင်းအဖြစ် ဝတ်ဆင်သည်ဟုလည်း အဆိုကွဲရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှု တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အဆင်အယင်လည်း တဖြေးဖြေး တိုးတက်လာသည်။ နောက်တွင် ထိုင်ဉ် (သို့) ထားမီ ဟုခေါ်သော ထဘီကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။
ထဘီကို ခြေဖဝါးဆုံးထိ ဝတ်ကြသည်။ မြေ၊ ကြမ်းပြင်နှင့် ထိအောင် ဝတ်ဆင်သည်လည်း ရှိသည်။ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ရက်လုပ်၍ ဝတ်ဆင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
(ဂ) နုမ္မာလ် (မတားရ် ဟောရ်)
နုမ္မာလ်( ခေါင်းလွှမ်းပုဝါ) သည်လည်း ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးအဝတ်အစားတွင် အဓိက အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလျား (၄)တောင်ခန့်ရှည်သော နုမ္မာလ် ကို ခေါင်းမှ ရင်ဘတ်ကျော်ထိ လှုံအောင် လွှမ်းကြသည်။ အစွန်း တစ်ဘက်ကို ရင်ဘက်၌ ထားပြီး ကျန်တစ်ဘက်ကို ကျော့ဘက်သို့ တွဲလောင်းချထားလေ့ရှိသည်။
(ဃ) ဂျူံရာ (ဆံထုံး)
မိမိတို့ ရိုးရာအတိုင်း ဆံထုံးအမျိုးမျိုး ထုံးကြသည်။ ပန်းကုံး၊ ပန်းပွင့်များကို ပန်ကြသည်။ လည်၌ သွယ်ကြိုးများ ဝတ်ဆင်သည်။ လက်ဝတ်ရတနာ အမျိုးမျိုး ဝတ်ဆင်ကြသည်။ (၎င်းတို့ကို အခြားပို့စ်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြပေး ပါမည်။
ဆံပင်ကို ဒေါရီး [Dorí] ဆိုတဲ့ ရောင်စုံချည်ကြိုးဖြင့် ရစ်ပတ်ကြသည်။ အပေါ်က ဇာပုဝါတစ်ခုကို လွှမ်းထားသည်။ အထူးသဖြင့် သတိုးသမီးများကို ဆင်ယင်ရာတွင် ဒေါရီးနှင့် ဆံပင်ရစ်ပတ်ခြင်း၊ ကြက်ခြေပေါက်ကဲ့သို ဇာပြုလုပ်၍ အနားတွင် ချည်စွန်း အလွတ်ဖြန့်ထားသော ချည်ဇကာ ကို ဆံပင်ပေါ် ပတ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ (အသေးစိတ်ကို ရိုအညာ မင်္ဂလာဆောင်တွင် ရှူပါ)
(င) ဇာလီ (ခါးစည်း)
အမျိုးသမီးများသည် ခါးတွင် ခါးစည်း ပတ်ကြသည်။ သူဌေးသူကြွယ်တို့သည် ရွှေငွေ ရတနာနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ဒူဝါလီ [Duali] ဟုခေါ်သော ခါးစည်ကို အလှဆင် ဝတ်ဆင်ကြသည်။ သက်ကြီးများကမူ အထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ခါစည်း [Zali] ကို အမြဲစည်းကြသည်။ ဇာလီ ခါးစည်းတွင် ထည့်ထားစရာ အခေါင်းရှိသည်။ မိမိတို့ သိမ်းထားလိုသော ရွှေငွေ မတ်စေ့ ဒင်္ဂါး အနည်းငယ်တို့ကို ကိုယ်နှင့်မကွာ ထားလေ့ရှိသည်။ “အဘွား၏ ခါးစည်း” ဆိုပြီး ပုံပြင်တောင်ရှိသည်။
အိမ် အပြင်ထွက်သောအခါ ဘိုရ်ခါ ဝတ်ရုံ [Burka] ခြုံကြသည်။ ပရ်ဒါဟ် လုံအောင် ထီးဆောင်းလေ့ရှိ သည်။ မည်သည့် ရာသီဖြစ်စေကာမူ ထီးဆောင်းကြသည်။ ယနေ့ ထီးဆောင်းသည့် ဓလေ့ ကွယ်ပျောက် လာနေသည်။ အချို့ ရှေးဘိုရ်ခါ ပုံစံများမှာ ထူးဆန်းလှသည်။ မျက်စိ နှစ်လုံး မြင်ရန်သာ အပေါက်ရှိသော ဘိုရ်ခါဖြစ်သည်။ ပွဲလမ်းသဘင်၌ အချို့က အပေါ်ရုံ ဇာအင်္ကျီများကိုလည်း ဝတ်ဆင်ကြသည်။
ဤသို့ဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖိုးအနဂ္ဃ ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည် အိစ္စလာမ် တရားတော်နှင့် လိုက်ဖက် ကိုက်ညီသည့်အပြင် အာရပ်-အာရီယာန် မျိုးနွယ် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းကိုလည်း ဖော်ဆောင်နေပေသည်။ ကျက်သရေဆောင် ရိုဟင်ဂျာရိုးရာ အဝတ်အစားကို ဂုဏ်ယူစွာ ဝတ်ဆင်ကြပါစို့။
Labels: ရိုးရာ, ရိုသမိုင်း, books, သုတ, ဆောင်းပါး